Hogaamiyayaasha Inter Milan Oo Soo Bandhigay Xiisaha Ay U Qabaan Romelu Lukaku
HomeWararka CiyaarahaHogaamiyayaasha Inter Milan oo soo bandhigay xiisaha ay u qabaan Romelu Lukaku
April 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Hogaamiyayaasha Inter Milan ayaa loo malaynayaa inay wax ka bedeleen mowqifkoodii ahaa inay dib ula soo wareegaan weeraryahanka Chelsea Romelu Lukaku .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa ku guuldareystay inuu qiil u sameeyo qiimihiisii ​​​​£97.5m ahaa xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee ku soo laabtay Stamford Bridge, waxaana uu qirtay wareysi muran dhaliyay sanadkii hore inuu doonayo inuu ku laabto San Siro.
Si kastaba ha ahaatee, xaalada dhaqaale ee Inter ee aan deganayn oo ay weheliso halgankii Lukaku ee bilawgii iyo qaab ciyaareedkiisa intii uu hogaaminayay Thomas Tuchel ayaa lagu soo waramayaa in ay kooxda difaacanaysa Serie A ku hogaamiyay in ay qaboojiso xiisihii ay u qabtay 28 jirkan.
La Gazzetta dello Sport ayaa sheeganeysa in awooda Inter aysan si buuxda albaabada uga furi karin Lukaku, kaasoo suurtagal ah inuu San Siro ku soo laabto.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Inter ay dooneyso kaliya inay heshiis amaah ah ku soo gabagabeyso heerkan, si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa weli ku jirta ganaaxa suuqa kala iibsiga iyadoo Roman Abramovich uu weli gacanta ku hayo kooxda.
Lukaku ayaa ka tagay Inter ka dib markii uu u dhaliyay 64 gool 95 kulan oo uu u saftay Nerazzurri, waxaana uu dhaliyay 12 gool 36 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan funaanada Chelsea.
Qandaraaska ciyaaryahankii hore ee Manchester United ee Chelsea ma dhacayo ilaa 2026.